Aneemiya - Dhiig la'aan - Somali Kidshealth
Aneemiya – Dhiig la’aan
21/04/2013 25/04/2013 by admin
Inta aan loo galin sharaxaada Aneemiyada ama dhiig la’aanta waxaa fiican in la fahmo baahida aadamiga ee neef-qaadashada. Isku day waxoogaa yar in aad neefta isku celiso. Muddo yar ka diba ma adkaysan kartid, waayo waxaad u baahan tahay ogsijiin si aad u noolaato. Taasi waxa weeye in sanbabadeenu jiidaan ogsijiin jirkeenu u baahan yahay si uu u noolaado.
Sidoo kale waxaan u baahanahay hab ama wado aanu nuddayaasha jirkeena ku gaarsiino ogsijiinta ay u baahan yihiin, si ay tamar u sameeyaan oo ay u shaqeeyaan. Dhiiggeenu wuxuu la mid yahay webi ama tog dhamaan jirka oo dhan dhexmaraya. Xubin kasta ama nudde kasta marka dhiiggu maro waxaa loo geeyaa ogsijiinta uu u baahan yahay iyo nafaqada uu u baahan yahay.
Goormaa Aneemiya timaadaa?
Aneemiya waxay timaadaa marka dhiigga ay ku yarraadaa unugyadda Cas-cas ee dhiigga(Red Blood Cells), ama uu yaraado xaddiga maadada Himigloobiinta( hemoglobin), oo ah barootiin dul yaal unugyadda cas-cas dushooda. Himigloobiintu waxay soo jiidataa ogsijiinta oo ay xanbaartaa ilaa la geeyo unnuga ugu shisheeya ee jirkeena.
Ilmo qaba Aneemiya waa adag tahay in si degdeg ah loo ogaado waayo calaamadaha aneemiyadu si degdeg ah uma muuqdaan. Waxaad arki kartaa inay caddaadeen maqaarka, isha qaybteeda cad iyo weliba ciddiyaha. Taas macnaheedu waxa weeye in dhiigga ilmahaas aysan ku jirin unugyo cas cas oo dhiigga ama unugyadaas ay ku yar tahay Barotiinka himigloobiinta. Ilmaha qaba Aneemia waxuu noqdaa mid daalan oo aan tabar lahayn oo wiiqma.
Unugyadda cas-cas(RBC) ee dhiigga waxaa lagu sameeyaa dhuuxa lafaha dhexdooda , waxaana muhiim u ah samayntooda macdanta birta ama Iron. Qofka binu-aadamiga ah 120 berri oo kasta waxaa laga dhex sameeya lafaha dhuuxa dhexdoodu unugyo cusub oo dhiigga cas ah.
Aneemiyada waxaa keena sababahaan:
Jirka oo aan samayn unnugyo cas-cas oo dhiigga ah. Waxaa jira dhawr sababood oo keenta in jirku samayn waayo unnugyada cas-cas ee dhiigga. Waxaa laga yaabaa in ilmaha ay hesho nafaqo-darro keenta inaan la dheefsan macdanta birta(iron) oo ah tan laga sameeyo Barootiinka himigloobiinta xanbaarta ogsijiinta. Macdanta birta waxaa laga helaa cuntooyinka hilibka, khudrada cagaaran iyo digirta. Waxaa kale oo jira fitamiino muhiim u ah samaynta dhiigga cas oo kala ah Folic Acid iyo Vitamin B12. Folic Acid waxaa laga helaa khudrada iyo miraha halka Vitamin B12 laga helo hilibka,caanaha iyo ukunta.
Aneemiya waxay kaloo timaadaa marka dhuuxa lafahu shaqayn waayo. Haddii caabuq ku dhaco lafaha ama uu haleelo cudurka arthritis ama cudurada kalyaha waxaa laga yaabaa dhuuxii inuu soo saari waayo unugyadii casaa ee dhiiga. Daawooyinka kansarka ayaa iyaguna saamaayn ku yeeshaa dhuuxa lafaha iyo samaynta unugyada cas-cas. Mararka qaar waxaa uu ilmuhu ku dhalan karaa dhuuxa oo aan shaqaynayn.
Haddii la burburiyo unugyo badan oo cas-cas dhuuxa lafahu ma soo saari karo unugyo badan si degdeg ah. Unugyada cas-cas burburintooda waxaa ugu badan marka ay dhacaan cuddurada Sickle cell Anemia oo ah cudur la iska dhaxlo oo soo gaabiya cimriga unugyada cas-cas ee dhiigga. Malaariyada ayaa iyana burburisa unugyada cas-cas. Sidoo kale marka mindhicirka yar yar ay jooggaan gooryaanka Ascaris oo ilmaha dhiigga ka jaqaya waxaa imaan kara Anemiyada.
Dhiig-bax badan wuxuu keenaa dhiig la’aanta ama Aneemiya. Haddii shil ilmuhu galo ama rasaasi haleesho waxaa imaanaya inuu dhiigbaxo. Waxaa jira dhiig-baxyo aan la garan karin oo muddo socda sida marka caloosha dhiig bax ka jiro oo dhiig madoow saxarada soo raaco sida marka uu jiro Gastaritis.
Sidee Aneemiyada loo daaweeyaa?
Daawaynta aneemiyada ee carruurtu waxay ku xiran tahay in la ogaado markii horaba waxa sababay dhiig la’aanta. Inta badan carruurta aan cunin cunto ay ku badan tahay macdanta birta amaba qaba nafaqo-darro waxay qaadayaan Aneemiya. Carruurtaasi waxay u baahan yihiin in la siiyo cuntooyin ay ku badan tahay macdantaasi. Waxaa jira cuntooyin lagu dabakahay macdanta birta sida Cerelac iyo mushaalida qaarkeed. Waxaa dhaqtarku kuu qori karaa daawooyinka ay ku jiraan birta, folic acid iyo Vitamin B12.
Haddii aneemiyada uu keenay caabuq sida malaariyada ama gooryaanka Ascaris oo kale waxaa loo baahan yahay in ilmaha la siiyo daawada Malaria ama gooryaanka laga daaweeyo.
Ilmo qaba aneemiya aad u xun wuxuu u baahanayaa in dhiig lagu shubo.
Posted in Cuddurada, Qanjirada marin la' / Dhiigga
PrevCallool-qalayl – Constipation
nextAutism – Sirgaxan